အကောင်းဆုံးလေ့ကျင့်ရေးကြိုးများအသုံးပြုနည်းနှင့်သင်သိသင့်သောအရာများ | ခွေးကမ္ဘာ
Susana godoy | 22/09/2021 15:39 | ခွေးဆက်စပ်ပစ္စည်းများ, လေ့ကျင့်ရေး
လေ့ကျင့်ရေးသိုင်းကြိုးသည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အလွန်နီးကပ်စွာရှိနေရမည့်အခြားအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်မရ။ ဒါပေမယ့်နည်းနည်းတော့ရုတ်ရုတ်သဲသဲဖြစ်နိုင်ပေမယ့်ပိုင်ရှင်နဲ့သူ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ကြားစကားမပြောဆက်သွယ်မှုကိုတည်ဆောက်ပေးမယ့်အကြိုက်ဆုံးကိရိယာတစ်ခုဖြစ်တာအမှန်ပါပဲ။ ထို့ကြောင့်လှုပ်ရှားမှုတိုင်းကိုအထူးဂရုပြုရန်လိုသည်။
ဒါပေမယ့်အဲဒါကငါတို့နောက်ပိုင်းမှာတွေ့ရမယ့်အရာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲဒါကဒီထုတ်ကုန်ရဲ့အခြေခံလုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုနည်းနည်းပိုနားလည်ဖို့ကူညီလိမ့်မယ်။ လေ့ကျင့်ရေးသိုင်းကြိုးနှင့် ငါတို့တိရစ္ဆာန်တွေကိုအမြဲအကာအကွယ်ပေးထားတယ်ဆိုတာငါတို့သေချာတယ်ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သူတို့အတွက်အကောင်းဆုံးတစ်ခုကိုအမြဲရွေးချယ်ရပေမည်။
5 ခွေးလေ့ကျင့်ရေးဆွဲကြိုးဘယ်မှာ ၀ ယ်ရမလဲ
dibea Correa ၏ lionto ...
Looxmeer ခွေးကြိုး ...
Looxmeer ခါးပတ် ...
ခွေးထိန်းကြိုး၏ရည်ရွယ်ချက်သည်သင်၏အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ကိုပညာပေးရန်ဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်လည်းအထူးသဖြင့်သင်လမ်းလျှောက်ထွက်တာဒါမှမဟုတ်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ချိန်တွေမှာသူတို့ကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကိုအဓိကထားပါတယ်။ ထို့ကြောင့်ခွေး၏ကော်လာ၏အစိတ်အပိုင်းတွင်ကိုင်ထားရန်ချိတ်တစ်ခုရှိသည်၊ ၎င်းကိုပြဿနာမရှိဘဲသယ်ဆောင်နိုင်သောအခြားအဆုံး၌ကောင်းသောအဆုံးရှိသည်ကိုငါတို့တွေ့သည်။
ဒါဟာငါတို့ကတုံးတိနည်းနဲ့ဖြေနိုင်တဲ့မေးခွန်းမဟုတ်ဘူး။ အဘယ်ကြောင့်? ကောင်းပြီ၊ အရာအားလုံးသည်အထူးသဖြင့်ခွေးအရွယ်အစားပေါ်မူတည်လိမ့်မည်။ ငါဆိုလိုတာက, စတင်ရန် မင်းရဲ့အမွေးရဲ့အလေးချိန်၊ အရွယ်အစားနဲ့မင်းရဲ့အမြင့်ကိုတောင်မင်းသိဖို့လိုတယ်မရ။ ဤနည်းအားဖြင့်သင်လိုအပ်သောအရာကိုသူ၏စိတ်ကူးတစ်ခုရနိုင်သည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ခွေးအားလုံးသည်တိုင်းတာမှု၊ စိတ်နေစိတ်ထားချင်းမတူကြပါ။
ထို့ကြောင့်ခွေးသည်လွတ်လွတ်လပ်လပ်လှုပ်ရှားရန်လိုအပ်သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့ကိုသက်တောင့်သက်သာထားရန်လိုအပ်သည်ဟုပြောရမည်ဖြစ်သောကြောင့်အနည်းဆုံးအရှည်မှာစံနှုန်းဟုခေါ်သည့်အနည်းဆုံး ၅ မီတာခန့်ရှိရမည်ဟုဆိုရပါမည်။ သင်၏ခွေးသည်သေးငယ်ပါကဤအရှည်ကိုမကျော်လွန်ဘဲ၎င်းသည်အနည်းငယ်ပိန်သည်ကို ဦး စားပေးကြောင်းသတိရပါ။ စဉ်တွင် ခွေးကကီလို ၂၀ ၀ န်းကျင်ရှိလျှင်ပိုထူသောကြိုးတစ်ချောင်းလိုသည် ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါတို့ကခုခံအားပိုလိုလိမ့်မယ်၊ ဒါပေမယ့်အရှည်က ၃ မီတာလောက်တော့ရှိတယ်။
ခွေးလတ်များသို့မဟုတ်ခွေးငယ်များသို့ပြန်လာသောအခါသူတို့ကစိတ်မရှည်ဖြစ်တတ်သည်၊ ခြေလှမ်းတိုင်းမှာအနံ့ခံပြီးကစားသည်ကိုကြိုက်သည်။ ကြိုးဆွဲကိုအရမ်းဆွဲနေတဲ့သူတွေကသူတို့ကိုပိုတိုအောင်ဝတ်တာကပိုကောင်းပါတယ်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သတိလက်လွတ်ဖြစ်နေလျှင်အချို့သောပြသနာများကိုရှောင်ကြဉ်ပါ။ ခွေးကြီးများအတွက်ခြေရာခံရန် ပိုအထီးကျန်တဲ့နေရာမှာလမ်းလျှောက်ဖို့၊ သူတို့ကအသင့်တော်ဆုံးမဟုတ်ပေမယ့်ပိုရှည်တဲ့ကြိုးတွေကိုမီတာ ၂၀ ထက်ပိုတဲ့ကြိုးတွေကိုသုံးနိုင်ပါတယ်။
ပထမဦးစွာ ကြိုးကိုငါတို့အိမ်ကဲ့သို့ပိတ်ထားသောနေရာတွင် ထား၍ ၎င်းနှင့်အတူလမ်းလျှောက်ပါ.
အဲဒါကိုမဆွဲပါနဲ့၊ ဒါပေမယ့်တိရစ္ဆာန်ကမင်းရဲ့ခေါ်ဆိုမှုတွေ၊ ကြိုးဆွဲတွေနဲ့သွားရင်ပိုကောင်းတယ်။
ငါတို့လုပ်ရမည် တိုတောင်းသောကြိုးဖြင့်လမ်းလျှောက်ပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်သည်မလှုပ်ပါကအနည်းငယ်ပိုသောကြိုးကိုဖြေလျော့နိုင်သည်မရ။ ၎င်းသည်အမြဲတမ်းထိန်းချုပ်ရန်နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဤအရာသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘ ၀ ၌လည်းဖြစ်ပျက်သည်၊ ထို့ကြောင့်အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များတွင်၎င်းအားချန်မထားခဲ့ပါ။ အမှန်တရားကမင်းမြန်မြန်စလေပိုကောင်းလေပဲမရ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သင်ယခင်ကသင်မျှော်လင့်ထားသောရလဒ်များကိုသင်မြင်ရလိမ့်မည်။ ဒါကြောင့်သင့်မှာလအနည်းငယ်ကြာတဲ့ခွေးတစ်ကောင်ရှိရင်လေ့ကျင့်ခန်းကနေစသင့်တယ်လို့ငါတို့အကြံပေးတယ်။
သင်ကသူ့ကိုသိုင်းကြိုးနဲ့ရင်းနှီးအောင်လုပ်တာစတာတွေကိုအိမ်မှာလုပ်လိမ့်မယ်ဆိုတာမှန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ဖြည်းဖြည်းချင်းသင်ဟာလမ်းပေါ်မှာရှိနေတဲ့အခါနဲ့ငါတို့အရင်ပြောခဲ့တဲ့အမိန့်တွေအပေါ်မှာအသုံးချလိမ့်မယ်။ စိတ်ရှည်ခြင်း၊ ဆုများစွာ (သို့) ဆုလာဘ်များနှင့်အချိန်များစွာလိုအပ်သည်။ ဒါပေမယ့်တိရိစ္ဆာန်ကအရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါသင်စတင်တာထက်ပိုလွယ်လိမ့်မယ်။
ခွေးလေ့ကျင့်ရေးဆွဲကြိုးဘယ်မှာ ၀ ယ်ရမလဲ
Amazon ၏အကောင်းဆုံးအချက်တစ်ခုမှာသူတို့၏ ၀ က်ဆိုက်ကို ၀ င်ရောက်သည်နှင့်သင်ပျော်ရွှင်နိုင်သည် ဖြစ်နိုင်ချေကျယ်ပြန့်မရ။ ဆိုလိုသည်မှာလေ့ကျင့်ရေးကြိုးများအားလုံးရှိလိမ့်မည်။ ၎င်း၏ဖွဲ့စည်းမှုပြီးစီးမှု မှစ၍ အရောင်အနည်း၊ အများကွဲပြားပြီးအရှည်လည်းကွဲပြားသည်။ ဆိုလိုတာကသင်ဟာသင်နဲ့သင့်ခွေးနဲ့အကိုက်ညီဆုံးသူကိုအမြဲတမ်းရွေးချယ်နိုင်တယ်။
သူသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များအတွက်လိုအပ်သောအရာအားလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့အားပေးသောထိုစတိုးဆိုင်များမှဖြစ်သောကြောင့် Kiwoko သည်သူ၏ချိန်းဆိုမှုကိုမလွတ်မြောက်နိုင်ပါ။ ဤကိစ္စတွင်သင်အကောင်းဆုံးသောကြိုးများရှိလိမ့်မည်။ စတစ်ကာများ (သို့) လက်ကိုင်များမှတစ်ဆင့်အတိုဆုံးမှသည်ချဲ့နိုင်သောအရာများမရ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ခွေးကိုပိုမိုသက်တောင့်သက်သာလေ့ကျင့်ရန်ပြီးပြည့်စုံသောကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံး
နှစ်ခုစလုံးတွင်အသုံးအများဆုံးတစ်ခုဖြစ်သောနိုင်လွန်ကြိုးများနှင့် အဆီပြန်သောအသားများTíanimal၌လည်းရှိလိမ့်မည်။ သို့သော်၎င်း၏မျိုးကွဲကြောင့်မဟုတ်ဘဲ၎င်းကိုအရောင်ကွဲများနှင့်အလွန်သက်သာသောစျေးနှုန်းများဖြင့်ရနိုင်သည်၊ ၎င်းသည်အများအားဖြင့်အမြဲထူးဆန်းသောကမ်းလှမ်းမှုများရှိသည်။ ယခုအချိန်သည်၎င်းကိုအခွင့်ကောင်းယူရန်အချိန်ဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခွေးကမ္ဘာကြီး » အထွေထွေခွေးများ » လေ့ကျင့်ရေး » လေ့ကျင့်ရေးခါးပတ်